Google ayaa uga digtay dadka isticmaala Gmail halis dhab ah. - EnG YaSiN - Short Tutorials
Dhawaan ayay aheed markii lasoo bandhigay naqshada cusub uu yeelanaayo Adeega Gmail ee Google Mail, waxaa durbaba lashaaciyay in loo adeegsan karo in dadka lagu khiyaano, warbaahinta ayaa sidaas sheegtay.
Shirkadda ayaa soo bandhigtay bishii Abriil naqshadeeda cusub oo soo saartay interface cusub Nadiifna ah iyo qaar ka mid ah Qaabab cusub waxaana ka mid ah dib udhigista fariimaha, iyo in uu sameeyo jawaab celin Caqliyeesan, iyo adeeg cusub oo ah burburinta fariimaha Email-ka ee ah kuwa SIRI ah.
Warbixinta ayaa sheegtay in Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Amniga (DHS) in ey soo saartay digniin ku saabsan “hanjabaad suurtagal ah” iyada oo dib loo eegayo Naqshadda Gmail.
Waxey Tiri Leslie Volop, Afhayeenka Wasaaradda Amniga Gudaha: “Waan la xiriirnay Google si aan ugu wargalinno arimo la xidhiidha adeegyadooda si loo hagaajiyo danaha aynu wadaagno..”
Mid ka mid ah qodobbada muhiimka ah ee welwelkaasi wada waa Adeega cusub ee “Emailka Qarsoodiga ah / Secret Email” Taasoo macmiisha/Users weydiineysa iney gujiyaan/Click Dabinada/Links si aad u hesho fariimahan.
Dib u habeynta Gmail kadib waxaa suuragal ah in Been-abuurayaashu in ey diri karaan nuqullo been-abuur ah oo ku saabsan digniinta email-qarsoodi ah ayadoo Isticmaalayaasha laweydiin karo faahfaahin xasaasiga ah.
Brooks Hoggog afhayeenka Google Ayaa yiri ” Shirkadda tiknoolajiyadeed ee weyn waxaa ka go’an inay ilaaliso amniga macluumaadka shakhsiyeed ee shakhsiyaadka, ayadoo sameeneyso (algorithms)” si loogu ogaado khayaanada khatarta ah ee dambiilayaasha internetka.